Rupo rwako ruchaponesa hupenyu.
Nekuita mupiro wehanya, unopa vana vanodheerera ramangwana rakajeka.
Denda iri rasiya vana vasina kusimba mupfungwa. Pavanodhererwawo, vanowanzosundwa kusvika kumucheto. Nerutsigiro rwako rwekufunga, tichava nechokwadi chekuti masevhisi edu erutsigiro aripo kwavari chero nguva, chero zuva, mahara, kugumisa kushungurudzwa kwavo.
Dzvanya pano kuti uite mupiro une hanya nhasi!
Kana uchida kudhinda fomu remupiro, rizadze woritumira kwairi BullyingCanada, dhawunirodha Fomu rako Remipiro pano. Kero yedu yetsamba inoti 471 Smythe Street, PO Box 27009, Fredericton, New Brunswick, E3B 9M1.
makore ebasa rinopihwa ne BullyingCanada
Kuchema kwekuda rubatsiro kwakagamuchirwa muna 2021
Nguva dzakawanda dzinochema rubatsiro rwakagamuchirwa uye rwakabatsirwa muna 2021, zvichienzaniswa ne-pre-denda 2019
Avhareji yenhamba yemaminetsi wechidiki anomirira kusvika ataurirana neMutsigiri Anopindura
Mamirioni kushanya ku BullyingCanada.ca muna 2021
Nhamba yemitauro iyo BullyingCanada.ca inopihwa mu
Dzimwe nzira dzekuratidza tsigiro ine hanya BullyingCanada
Iva Mutsigiri Anopindura, kana kubatsira nemabasa ekutonga. Isu tinokoshesa chipo chako chenguva uye hunyanzvi!
Ita chimwe chinhu chinonakidza kuunganidza mari BullyingCanada!
Regedza rutsigiro rwekambani yako, uye uzivikanwe semugari wekambani ane hanya!
Zvipo zvikuru uye zvipo zvezvivimbiso zvinokosheswa zvinobatsira BullyingCanada fambirana nekuwedzera kuri kuwedzera kudiwa kwerubatsiro rwedu.
Yakare kana itsva, inomhanya kana kwete, zviri nyore kumotokari isingadikanwi murutsigiro rwomwoyo wose kuvana vanodheererwa!
Zvipo zvakaitwa kuburikidza nechido chako, inishuwarenzi uye mari yekuchengeta pamudyandigere zvinotsigira vechidiki vanodheererwa kuzvizvarwa zvichauya!
Thanks enda kuvatsigiri vedu vane rupo!
Shanyira peji redu reSponsors kuti upe mutero kune vedu vakuru vanopa!
Unoda kuzvipira nguva yako?